Ukuphupha amaqebengwana Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Iphupha malunga namaqebengwana
Ngokwesiqhelo, izinto ezibhakiweyo zizinto ezahlukeneyo ezibhakiweyo ezibhakwa njengeziqwenga zomntu kwitreyi okanye epanini. Ngapha koko, ezi zinto zibhakiweyo zinokugoqwa nzulu, ezinje nge 'Berlin pancakes', ekwabizwa ngokuba yi 'Berliner' ngamafutshane, eyaziwa njenge 'Krebbel' okanye 'Krapfen'.
Ngaphakathi kwivenkile yokutya, kwenziwa umahluko phakathi kweeswidi kunye nezohlobo olumnandi. Iikeyiki ezimnandi, umzekelo, iibhiskithi okanye iicookies, iikeyiki, iikeyiki, iikeyiki ezincinci kunye namaqebengwana aseDanish. Izinto ezibhakiweyo zokugcina ukutya zibandakanya iintonga ze-pretzel, ii-cheese crackers, okanye ii-quiches. Kuxhomekeka kwizithako zazo, ii-muffins zinokubalwa kuzo zombini iikeyiki ezinencasa kunye nezithandekayo. Izinto ezininzi ezibhakiweyo zisulungekiswa ngamakha aswiti kwaye ashushu okanye amuncu kwaye anevumba elimnandi lokuzinika incasa ekhethekileyo - isonka sejinja sinokuba sisiqingatha nje esimnandi ngaphandle kwe allspice, iicloves, i-anise, ijinja kunye nazo zonke ezinye izinongo ezikuyo.
Kodwa kutheni uphupha amaqebengwana ngoku? Ukhe walala ungatyanga yilonto uphupha ngayo? Okanye ngaba kukho umkhondo ohluke ngokupheleleyo ofihliweyo ngasemva kwalo mfuziselo wamaphupha?
1 Uphawu lwephupha «i-pastry» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «i-pastry» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iikeyiki» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «i-pastry» - ukutolikwa ngokubanzi
Inqanaba eliqhelekileyo lokuhlalutya iphupha libona "kwi-pastel" yomfanekiso wephupha umnqweno wobuthongo wobomi ihotele ngezibonelelo ezininzi. Iphupha elinjalo lisenokucela ukuba iminqweno yakho yangaphakathi icaciswe. Ayinamsebenzi nokuba yeyokwenyama okanye yeyokwenyama.
Nabani na obona amaqebengwana epleyitini ephupheni lakhe, ulindelo lwakhe luya kudana kwimicimbi yezemali, kunye nothando. Ngamanye amaxesha le meko yamaphupha inokuchaphazela i- Kukhuthaziwe ikhonjwe ngumntu onobuqili.
Ukuthenga iipheki kukuthembisa ngekamva umvuzo olungileyo. Kwelinye icala, xa uthengisa amaqebengwana ngelixa uleleyo, uyakufumana uphawu lwebhongo onalo lomsebenzi.
Ukuba umntu ophuphayo ubhaka amaqebengwana ephupheni lakhe, mhlawumbi kunye neerasentyisi, ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha, unqwenela iimveliso ezilungileyo el mundo yomlindo. Utshintsho. Ukuba ubona umbheki wezonka ebhaka amaqebengwana, ungalindela umzuzu wokonwaba kungekudala, oya kuthi wonwabe.
Ukutya iikeyiki njengomfanekiso wephupha kuhlala kubhengeza kwabo baphuphayo iingxabano ezincinci eziza kubakho kwisangqa sosapho. Bhaka ii-cookies IKrismesi Ephupheni kudla ngokufuzisela umnqweno walowo uleleyo. ixesha leHarmonic nosapho lwakhe.
Uphawu lwephupha «i-pastry» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, i-pastry ephupheni inokunyusa ithemba lalowo uphuphayo ngakumbi khu seleko kwaye ifanekisela uthando. Umntu olalayo uyilangazelela ngaphakathi, kodwa ngokubanzi akayivumeli loo nto. Unokoyika ukuphulukana nenkululeko yakho.
Iikeyiki njengophawu lwamaphupha ziyavela rhoqo kumaphupha amadoda. Oku kufanele ukuba kubenze bazi ukuba bangathanda ukufumana izibonelelo zobambiswano, kodwa abafuni ukunika inkululeko "yobukho babo obukhethekileyo." bucala ngasekhohlo Ungquzulwano ngoku umntu kufuneka azi kwaye azame ukuyisombulula.
Iicakes Ngokusekwe kuphawu lwephupha "iilekese", iikeyiki zinokusetyenziselwa ukungoneliseki. iminqweno yesini bhekisa. Ngokukodwa ukuba uhambisa iikeyiki kunye neelekese ephupheni lakho, oku kungabonisa ukuba izinto ozilindeleyo kule ndawo ziyacinezelwa.
Uphawu lwephupha «iikeyiki» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwephupha lokomoya kutolika uphawu lwephupha «i-pastry» njengophawu lokulangazelela komphuphi i Umthamo wendlela yobomi.
Iphupha malunga neemoto